Sababtii Uu Ralf Rangnick Iskaga Diiday Inuu Noqdo Tababaraha Chelsea Ka Hor Intii Aanay Magacaabin Thomas Tuchel - Laacib
HomeWararka CiyaarahaSababtii Uu Ralf Rangnick Iskaga Diiday Inuu Noqdo Tababaraha Chelsea Ka Hor Intii Aanay Magacaabin Thomas Tuchel
Sababtii Uu Ralf Rangnick Iskaga Diiday Inuu Noqdo Tababaraha Chelsea Ka Hor Intii Aanay Magacaabin Thomas Tuchel
Tababaraha Manchester United ay magacaabayso ee Ralf Rangnick ayaa horraantii sannadkan iska diiday inuu noqdo macallinka cusub ee waqtigii ay shaqada ka caydhiyeen Frank Lampard, ka hor intii aanay helin Thomas Tuchel.
Chelsea ayaa xidhiidh la samaysay Ralf Rangnick ka hor intii aanay caydhinin Lampard bishii January ee horraantii sannadkan, waxaanay ka dalbadeen inuu u noqdo tababaraha ku-meelgaadhka ah ee kooxda gaadhsiinaya illaa dhamaadka xilli ciyaareedka.
Hase yeeshee, Ralf Rangnick ayaa u sheegay in aanu noqonayn ‘tababare ku-meelgaadh ah’, sidaasna ku diiday fursaddii uu ka helay Stamford Bridge.
Chelsea ayaa qaadatay go’aan adag oo ah inay la xidhiidhaan Thomas Tuchel oo laba bilood ka hor laga soo caydhiyey Paris Saint-Germain, kaas oo markiiba isbeddel ku sameeyey kooxda, isla markaana u qaaday Champions League.
Ralf Rangnick ayaa isaguna aqbalay shaqadii uu ka diiday Chelsea, waxaanu noqonayaa tababaraha ku-meelgaadhka ah ee Manchester United isaga oo gaadhsiin doona illaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin waxa marka ay dhamaadaan lixda bilood ee heshiiskiisu, uu isla Red Devils ka qaban doonaa shaqo kale oo ah lataliye oo uu muddo laba sannadood ah hayn doono.
63jirkan ayaa waraysi uu siiyey wargeyska The Times, waxa uu kaga hadlay fursaddii tababarenimo ee uu ka helay Chelsea iyo sababta uu ku diiday, waxaanu yidhi: “Waxa aan ku idhi Chelsea, ‘waan jeclaan lahaa in aan imaaddo oo aan idinla shaqeeyo, laakiin ma doonayo afar bilood. Anigu ma noqonayo tababare ku-meelgaadh ah.'”